Tyler oo ka bilaabmaysay gurigii kalabadhkeeda sii daayay, sameeyo tijaabo! - TAAGEERADA Kevin & Tyler
Sanad ka hor, Tyler Lang ahaa xukumay saddex bilood waqtiga u adeegeen, lix bilood oo xarig ah guriga, lix bilood guri kalabadhkeeda, iyo sanadka ah ee la sii daayo ee kormeersan, oo ay la socdaan magdhabaa. Maanta, uu la sii daayay oo ka bilaabmaysay gurigii kalabadhkeeda oo muddo of sii daayo ee kormeersan dhamaaday!
Tyler lagu xukumay waafaqsan Xeerka Animal Enterprise Argagixisada ee la xorayn, 2,000 minkiga ka beer dhogorta iyo buufiyo-rinjiyeynta a "Liberation waa Love" dhinaca of barn la codefendant Kevin Johnson. beer dhogorta The xiray oo sabab u ah in ay tallaabo — saving generations of animals from being tortured and killed there.
Celebrate this day with Tyler, iyo sidoo kale ay qaataan waqti si ay u taageerada dadka ay weli xabsi iyo in ay ka shaqeeyaan xoolaha kuwaas oo weli baqashada.
← Bayaanka ka soo Kevin